फण्डिङको पीएचडीले मुखमा मास्क, शरिर निर्वस्त्र पारेर कहिलेसम्म अरुलाई गाली गरिरहने? – PathivaraOnline
Home > समाचार > फण्डिङको पीएचडीले मुखमा मास्क, शरिर निर्वस्त्र पारेर कहिलेसम्म अरुलाई गाली गरिरहने?
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री समेत भैसक्नु भएका तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अर्थमन्त्री खतिवडा बिदाइ हुँदा गोहीको आँसु झारेजस्तो नाटक गरेका आरोप लगाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् यस्तो बताएका हुन्। ‘विगत तीन वर्षसम्म अर्थमन्त्री हुँदा डाक्टर युवराज खतिवडाका राम्रा कामको पक्षपोषण महाशयले कहिले गर्नुभएको थियो र?
उनले भनेका छन्, ‘अहिले उहाँ त्यस जिम्मेवारीबाट बिदाइ हुँदा गोहीका आँसु झारेजस्तो गर्नु र रूवाबासीको नक्कली नाटक प्रदर्शन गर्नु? अरूको सम्मान नगर्नेले लोकबाट कसरी सम्मान र मर्यादा पाउँछ? कसरी त्यसको अपेक्षा गर्नु? ‘पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले सामाजिक मर्यादा र शिष्टता पोलेर खाएपछि सायद यस्तै हुन्छ कि? डा बाबुराम भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको सम्मानित व्यक्ति हो कि गाली शिरोमणि’ उनले लेखेका छन्, ‘केही भाषा, गालीगलौज र सन्तुलन गुमाएकोजस्तो अभिव्यक्तिबाट के बुझ्ने? के सिक्ने? के अनुशरण गर्ने?’
‘केपी शर्मा ओली निरंकुश राजतन्त्रविरूद्ध गोलघर, जेल र सेलमा १४ वर्ष जेल बसिरहँदा तपाईं फण्डिङबाट पीएचडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो’, उनले भनेका छन्, ‘अहिले त्यही फण्डिङको ऋण चुक्ता गर्दै हुनुहन्छ कि नुनको सोझो मात्रै’ जबकि विप्पा सम्झौता गरेर जुवा खेले भन्ने तपाईको आफ्नै कार्यशैली सम्झिनुस् त कस्तो थियो।’